सागर चन्द, कृष्ण लोथ्याल काठमाडौं, १९ साउन
तरकारी बारीको बीचमा रहेको यो घर आखिर संस्थाकै रहेछ । ‘भ्वाइस अफ फिटस, नेपाल’ नेपालीमा अनुवाद गर्दा ‘भ्रुणको आवाज’ ।
भ्वाइस अफ फिटस नेपाल गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्था समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्तासमेत भएको छ ।
यो संस्थाको उद्देश्य हो– यौन दुरुपयोग रोक्नु र गर्भपतनको विकल्प खोज्नु । गर्भपतनको विकल्प खोज्ने प्रयासमा लागेको यो संस्था गर्भपतनलाई पाप भन्छ ।
सरकारले कानूनसम्मत बनाइसकेको गर्भपतनलाई यो संस्था गैरकानूनी भन्छ ।
संस्था भन्छ, ‘२६ सेप्टेम्बर २००२ नेपाली इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको त्यो दुर्भाग्य दिन ।’
गर्भपतनको विकल्प खोज्ने यो संस्था शान्तिकुमारी सुनुवारको नाममा दर्ता छ । यो संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुन् सोमन (एलिसा) राई ।
खोटाङ घर बताउने राई आफू लामो समयदेखि समाजसेवामा लागेको बताउँछन् । गर्भपतन गराउनु पाप हो भन्ने सन्देश फैलाएर आफूले समाजसेवा गरिरहेको दाबी पनि गर्छन् राई ।
आफ्नो संस्थाबारे राई भन्छन्, ‘हाम्रो संस्थाले गर्भपतन गर्नुहुन्न भन्छ । यसमा चाहे एक हप्ताको होस, चाहे एक महिनाको होस । हामीचाहिँ गर्भपतन नगराउनुस्, पूरा हुर्कन दिएर बच्चा जन्माउनुहोस् भनी प्रोत्साहन दिन्छौं ।’
२०६६ सालबाट सुरु भएको यो संस्थामा आउँछन् अविवाहित गर्भवती युवती । र, कहिलेकाहीँ विवाहित महिला पनि । राईका अनुसार संस्थामा आउने गर्भवती धेरैजसो अविवाहित नै हुन्छन् ।
अविवाहित गर्भवती युवतीलाई कसरी बच्चा जन्माउन उक्साउँछ संस्थाले ? विवाहित तर परपुरुषको गर्भ बोकेकी महिलालाई कसरी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्छ त यो संस्थाले ?
सबैभन्दा पहिले गर्भवती युवती तथा महिलालाई सीपमूलक तालिम सिकाउने भन्दै यहाँ ल्याइन्छ । युवतीको छरछिमेक मात्रै होइन, यहाँ पनि वरपर कसैले सोधिहालेमा तालिम लिन आएको भनिन्छ ।
‘यहाँ आउने प्रायः विवाहअगाडिको केस हुन्छ । यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरका रूपमा चिनाउँछाैं । यहाँ आउनेहरुलाई सीपमूलक तालिमका लागि आएको भनेर चिनाउँछौं,’ राई गर्वसाथ भन्दै जान्छन्, ‘यहाँ ल्याउने कुरामा धेरै प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ ।’
उनले शिलापत्र संवाददातालाई अर्को उपाय पनि सुझाए, ‘आफन्त वा नातेदारकहाँ बस्न जाने भनेर गर्भवती ल्याउँदा पनि हुन्छ ।’
गोपनीयताको अधिकतम ख्याल गर्दै गर्भवती युवती/महिलालाई ल्याइसकेपछि गर्भवतीको सबै जिम्मा लिन्छ संस्थाले । प्रहरी, प्रशासनलगायत केहीको चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्छन् निर्देशक राई ।
रहस्यमयी घर–१ः गोदावरीको याे घरमा किन जान्छन् गर्भवती ?
त्यस्तै, प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सेटिङ मिलाउने जिम्मा आफ्नो हो भन्छन् राई । उनी भन्छन्, ‘यहाँको प्रहरी र स्थानीय निकायलाई हामी मिलाउँछाैं त्यसैले उताबाट ल्याउँदा पुलिस रिर्पोटको झन्झट गर्नुपर्दैन । सिधै ल्याउने सबै प्रक्रिया हामी गर्छौं ।’
यहाँ आउने गर्भवती युवती र महिलाले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था संस्थाले नै गर्छ ।
‘हामीले आर्थिक कुरामा ‘फ्रि’ गरेका छौं । यहाँ खाना पकाउने आदि इत्यादीमा सहयोग गरे पुग्छ । गर्भवतीले हेभी काम गर्नुपर्दैन । अरु पैसा लाग्दैन,’ राईले भने ।
राईको दाबीअनुसार घर निर्माणदेखि गर्भवती युवती र महिलाको सबै खर्च उनी व्यक्तिगत रुपमा बेहोर्छन् । तर, कुरा गर्दै जाँदा उनले रहस्यमयी कुरा भने, ‘सक्नेहरुले हामीलाई डोनेसन दिन्छन् । राम्रै परिवारको मान्छे पनि आउँछन् ।’
१ करोड ५० लाखभन्दा धेरै रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको यो घर र जग्गा आफ्नो निजी हो भन्छन् राई ।
कसरी सुरु भयो संस्था ?
सरकारले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएपछि गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भयो । तर, राईलाई भने गर्भपतन गराउने सरकारी निर्णय चित्त बुझेन ।
अनि, त्यसपछि उनले ‘प्रो लाइफ’ अभियान भन्दै गर्भपतनको विरोधमा अभियान सुरु गरे ।
अभियानले मात्रै नपुगेपछि उनले संस्था नै खोले । र, संस्थाको लक्ष्य वा नारा राखियो, ‘यौन दुरुपयोग बन्द गरौं । अनिच्छित गर्भको रोकथाम गरौं । गर्भपतनलाई नै समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प नबनाऔं, आमा र बच्चा दुवैलाई बचाउने विकल्प निकालौं ।’
यही अभियानअन्तर्गत रहेर राईले पहिलो चरणमा गर्भवती युवती तथा महिलालाई आफ्नै कोठामा ल्याए ।
‘पहिला पहिला हाम्रै आफ्नै कोठामा ल्याएर राख्थ्यौं । त्यो व्यावहारिक भएन,’ राईले भने ।
नेपालमा कसैले नगरेको काम गर्ने सोचका साथ आफूले यो काम सुरु गरेको राईको भनाइ छ ।
‘म पहिलेदेखि सोसल वर्क गरिराख्ने । मचाहिँ नेपालमा अरु कसैले नगरेको काम गर्न चाहन्थें । अनि, यो एबोर्सनको इस्यु नेपालमा धेरै जल्दोबल्दो भएकाले पहिलोचाहिँ मैले एबोर्सन गर्नुहुन्न भनेर धेरै चेतनामूलक काम गर्दै हिँडें ।’
यही चेतनामूलक काम गर्दा गर्दै उनले यो काम सुरु गरे । आफ्ना सुरुवाती दिन सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘पहिला म गर्भवती युवती र महिलालाई विशेषगरी मिल्ने साथीका घरमा राख्थें । तर, त्यो व्यावहारिक भएन । प्राइभेसी भएन । अनि, हामीले हाउस रेन्टमा लिएर सुरु गर्यौं ।’
त्यसपछि उनले नख्खीपोटमा घर भाडामा लिएर गर्भवती युवती र महिला जम्मा गर्न थालें । त्यहाँ पनि गोपनीयतामा अप्ठ्यारो भएपछि यहाँ (गोदावरी नगरपालिका, टौखेल) आउनुपरेको बताए राईले ।
(गर्भवती युवती र महिलाले जन्माएका सन्तान कहाँ जान्छन् ? तिनीहरूले जन्माएका सन्तानलाई के गरिन्छ ? कहाँ लगिन्छ लगायतका बिषयका लागि अर्को शृंखलामा ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १९, २०७६, २२:१५:००